चिउँडो र टाउकोमा मास्क लगाउँदा झन् जोखिम, कस्तो अवस्थामा मास्क नफुकाल्ने? – Padhnekura
चिउँडो र टाउकोमा मास्क लगाउँदा झन् जोखिम, कस्तो अवस्थामा मास्क नफुकाल्ने?
लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसहरु बाहिर निस्कने क्रम बढेको छ। कार्यालय, कलकारखाना पनि खुल्न थालेका छन्। सार्वजनिक यातायातका साधन समेत चल्न थालेका छन्। घरबाहिर निस्कने धेरैजसो मानिसहरुले मास्क लगाएको देखिन्छ।
तर, कतिपय मानिसले मास्कको सही प्रयोग गरेको देखिँदैन। केही मानिसहरुले टाउकोमा मास्क लगाएको पनि देखिने गरेको छ । कसैले हातमा झुन्ड्याउने र केहीले अर्को व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा मास्कलाई नाक मुखभन्दा तल सारेर चिउँडोमुनि पुर्याडएको पनि देखिन्छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरु मास्कको उचित प्रयोग नगर्दा संक्रमणको खतरा झन् बढ्ने बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार एउटै मास्कलाई कहिले हातमा, कहिले टाउको, कहिले कानमा मात्र त कहिले चिउँडोमा राख्ने र पुनः त्यसलाई नै प्रयोग गर्ने कार्य गर्दा संक्रमणको जोखिम रहन्छ ।
मानिसहरूले लकडाउन खुकुलो भएको विषयलाई हल्का रुपमा लिएको र अब जोखिम नरहेको अर्थमा बुझेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा, भिडभाडमा भएको अवस्थामा, किनेमेल गर्दा, सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा मास्क खोल्ने, लगाउने वा पटकपटक हातले छुने गर्नु हुँदैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले लकडाउन खुकुलो भएपनि जोखिम कम नभएको बताउँछन्। नाक, मुख राम्रोसँग छोपिने गरी सही तरिकाले मास्क लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निजामति अस्पतालका फिजिसियन प्राध्यापक डा दिनेशकुमार लम्साल मास्कले कोरोना भाइरस संक्रमण मात्र नभई अन्य संक्रमणबाट पनि बचाउने बताउँछन्। उनले मास्कको प्रयोग गर्दा खोक्दा, हाच्छ्यूँ गर्दा निस्कने थुकका छिटा अर्को व्यक्तिमा सर्नबाट रोक्ने बताउाछन्। उनले मास्कको सही प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मास्क लगाएर मात्रै कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सकिँदैन। मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको उचित व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सकेसम्म बाट बाहिर ननिस्कन सुझाव दिएको छ। संगठनले घरबाट बाहिर निस्कने परेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा मास्कको उचित प्रयोग गर्नका लागि मास्क लगाउनु पूर्व साबुन पानीले हात धुन, मास्कमा प्वाल भए नलगाउन, मास्क खुकुलो छ भने अर्को मास्क लगाउन सुझाव दिइरहेको छ।
यसका साथै संगठनले भिडभाडमा तथा अन्य व्यक्तिसँग आमनेसामने बसेर कुराकानी गर्ने क्रममा मास्कलाई चिउँडोमा राख्नु वा फुकालेर कुराकानी गर्नु गलत रहेको भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ । मास्कको उचित प्रयोग गरेको अवस्थामा पनि अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा कम्तिमा १ मिटरको दुरी कायम गर्न पनि संगठनले सुझाएको छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले पनि मास्क लगाइसकेपछि मास्कमा नछुन, कसैसँग कुराकानी गर्नु परेमा मास्क नफुकाल्न, सर्जिकल मास्क छ भने एक पटक प्रयोग गरेपछि त्यसलाई पुनः प्रयोगमा नल्याउने र कपडाको मास्क छ भने राम्रोसँग धोएर मात्र लगाउन सुझाव दिएका छन् ।
Video presented by Swasthyakhabar
डब्ल्यूएचओ भन्यो– केही देश गलत बाटोमा, कोरोना…
Next एमडी/एमएस पढ्न खुलामा ५०, सरकारी ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत कोटा